Iyo kambani yanga iripo kubva 1963 uye parizvino awana mukurumbira wakanaka pakati pevanhu vese. Nekuda kwekuwedzera kwayo kukurumbira, kambani ine zvinopfuura 1.000 vashandi uye vanopfuura 500.000 vashandisi vanoshanda.
Kunyangwe hupfumi ruzivo, chiratidzo chinowanikwa muSpain mumwedzi yekupedzisira. Munyika yedu, yakabvumidzwa neDirector Directorate Yekubheja (Vamwari) ndiko kuguma kwe data, saka tinogona kuvimba nekuchengetedza kwepuratifomu. Spanish mitambo yaunofarira uye inonyanya kunakidza muParis kupfuura mafungidzirwo anogona kugadzirisa Eurovision. Mune imwe neimwe nzira, kusarudzwa kwezviitiko nemakwikwi zvakare zvakapamhama pane hwevhareji.
scandinavia kambani, kuti iwe unogona kuona hafu yezana renhoroondo, Iyo ndeimwe yeParis yakakurumbira uye yakabudirira, iyo Spain nzvimbo haigone kupotsa.. Mukuongorora kwedu, tinoona yakasiyana varaidzo betsson.es uye kukwidziridzwa yakagadzirirwa isu. Yese yakakodzera mibvunzo pamusoro peParis online mutambo ruzivo unopindurwa pasi apa.
Betsson uye PERU
Betsson mutungamiri wepasi rose mune zvemitambo muParis akasarudza kupinda mumusika wePeruvia mukati 2008 yemitambo online mitambo yekubheja mukuputika Peru muParis, anodiwa muParis.
Ichave muPeru kweanopfuura makore gumi, iyo nhamba uye yakakwanisa kugara pakati pevakanyanya kubheja vatambi vanopa zvakanakisa zvibvumirano uye kukwidziridzwa, bonuses uye inopa dzakasiyana siyana online kasino mitambo, sezviuru mazana ad nzvimbo, dema uye kugara roulette.
vhiki nevhiki inogadziriswa Betsson Casino inopa kukurudzira kutsva uye mitambo kubheja.
Betsson anogara achipa kukurudzira kwakanyanya kune vatambi vatsva uye anogara aripo mune zvese midhiya, kusanganisira mapepanhau, radio, terevhizheni, pamusoro pekupa zita rake aimbove mutambi wenhabvu uye mutambi wenhabvu Nolberto Solano semumiriri wake Peru.
mitambo modalities inopa: mitambo sarudzo uye mhando dzeparis
Ivo vanotsanangurwa se “mutambo mutsva uyo uchachinja nzira yekuona mutambo muSpain” uye chokwadi ndechekuti iwe hausati uchizowana chero papi pekekodhi ye kupfuura 4.000 misika. Kubheta mutambo waunofarira hakuna kumbobvira kwakaita nyore uye nyore! Asi kwete yese mitambo Paris, pano tinogona zvakare kubheja nezvematongerwo enyika, TV nemabhaisikopo kana zviitiko zvakakurumbira (seEurovision, sezvataurwa pamusoro).
Kupfuura 40 mitambo, nhabvu ine basa rakajeka, izvo zvinowanzoitika kuburikidza nemapati 'portal. Uye kana iyo yeruzhinji ichida nhabvu, Chisarudzo chakasiyana oh! Mumutambo wekutanga wedunhu, Kazhinji, kune anopfuura zana zana kufungidzira kwechiitiko.. Zvichienderana nemhedzisiro yehuwandu hwekurwadziwa iwe hwaunogona kuwana pedyo 200 mhando dzeparis.
Nezve kugoverwa kwezvinhu zviri mukona yepamusoro kuruboshwe, pane kutsvaga chiitiko. Nekugona kugara muParis panguva yemutambo, kana zviitiko muhupenyu mushure mekufa kana Paris isati yatanga pamberi pemutambo.
Mune iyo inotevera khamera pane akateedzana mhando uye kana iwe ukadzvanya pairi, iwe uchaona imwe chikamu cheiyo rondedzero yemisika irimo. Pakupedzisira, kuruoko rwerudyi rwechidzitiro, pane coupon, nezvisarudzo zvakaiswa mucherechedzo nenhamba yeParis.
Yakadzokororwa, pano unogona kufanotaura nezvemitambo: nhabvu, Basketball, volleyball, ice hockey, baseball, Foromani 1, gorofu, tenisi, handball uye zvimwe. Paris ndiyo inonyanya kuzivikanwa ligi sezvakaita Champions League, Champions League, Premier League, NBA… Y, chokwadi, rarama chiitiko muParis, sezvakarongwa. Ona pazasi kune murume weParis kuBetsson, mumwe nemumwe.
Betsson inopa vashandisi vatsva mukana wekupeta yavo yekutanga dhipoziti inosvika kuS / 300 the $ 100 (chete mabhonasi evatambi vanobva kuPeru), zvakare zvichienderana nehuwandu hwetangi yechipiri, kupa yemahara mitambo iyo inogona kushandiswa kune yakanakisa bhasiketi kubheja, Tennis nemitambo yeligi kupfuura mutambo waunofarira.
Kuti uite activation iyi unofanirwa kunge uine yakaderera S / 30 the 10 $, uchishandisa imwe yenzira dzekubhadhara, PagoEffential PagoDirecto, MasterCard uye Visa.
Zvinokurudzirwa kuti bhonasi ishandiswe pamberi pokubheja, usaisa zvakare kuisa mari yacho mubhonasi.
Kuti ukwanise bhonasi unofanira kutamba bhonasi mari parutivi uye tamba mitambo yekubheja mitambo, Paris kubhejera masisitimu uye POS inodzivisa yekusimudzira bhonasi. Kana iwe ukafunga kubvisa uye mamiriro ekugamuchira kunyange bhonasi pamwe nebhonasi ichamiswa uye kubatsirwa kweprimiyamu nedipo kuchishandiswa zvakasiyana..
Chimwe chinodiwa mari yebhonasi katatu, kubereka, semuenzaniso, kana yekubatanidza level S / 20 gamuchira S / 20 x 6 = S / 120 zvinoshanda, nhamba iyi inofanira ikozvino kusarudza yakasimba 50 Ndira raBhonasi pakupedzisira rinogona kutora kukunda kwekupedzisira.
Aya mamiriro ese ezvinhu anofanirwa kusangana mukati me 30 mazuva asati abviswa. Kana mushure menguva yakareba mari yakasara yebhonasi ichiri kusara ichisiiwa.
Kubva paris, kusanganisira hupenyu panguva yekutarisana (zvinangwa, makadhi, etc.), nehupamhi hwekuronga zviitiko zvakakosha. Sekukurumidza kuenzanisa pakati pemaseti maviri (makadhi, makona, kurwiswa kwakashata, kupfura pachinangwa, etc.).
Padivi rorudyi remufananidzo rinoratidza nzvimbo dzakakodzera dzezviitiko sekurwiswa, asi umboo hwacho hahubetseri.
Kana mahombekombe anopinda mukati mekatikati nenguva chaiyo sezvo mutambo uchingopfuurira. Kuzere, chikamu ichi hachingogonesa vamwe chete; achienzaniswa nevanokwikwidza, hapana ruzivo rwakakwana pano.
Kuna William Hill iye, Betfair y Bwin, iwe unogona kutevera nhepfenyuro yechokwadi yezviitiko nemufananidzo weTV.